Wayszọ asaa iji hazie multiboot na Windows 8 na Linux | Site na Linux
Wayszọ asaa iji melite multiboot na Windows 8 na Linux
Charlie-Brown | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Gigabyte osisi UEFI
Bọchị ole na ole gara aga otu ezigbo enyi na-agba mgba maka akwụkwọ ndetu ọhụrụ ya (nke dị ka atụmanya bịara UEFI na Windows 8 arụnyere) na-anwa ịwụnye Arch na 'dual boot' na-enweghị ihe ịga nke ọma. Ozugbo m ehichapụsịrị akụkụ Windows ma wụnye naanị Arch, Achọtara m otu isiokwu na otu nke ọkacha mmasị m na saịtị, nke na-akọwa 7 ụzọ dị iche iche iji hazie multiboot na Windows 8 usoro.
Na aro nke enyi a, onye natara ozi n'oge, ekpebiri m ịtụgharị isiokwu ahụ dum iji mee ka mmadụ niile nwee ike ị nweta ya, ka ndị na-enweghị ike ịgụ ya n'asụsụ mbụ ya nweta ndụmọdụ ya, agbanyeghị, dị ka mgbe niile Ana m akwado ndị niile nwere ohere, gaa ozugbo na isi mmalite nke ga-aba ọgaranya karịa ntụgharị ọ bụla.
Dị ka ozi mmalite, isiokwu a na-ekwu bụ nke ikpeazụ nke usoro 3 na otu isiokwu ahụ, onye edemede dere ya blog ke ebe ZDnet.com, nke m na-akwado ịgụ ka ndị chọrọ ịkọwa nkọwa banyere okwu a. Banyere onye edemede nke otu, aha ya bụ JA Watson o nwekwara mmalite dị egwu nke ọ kọwara dị ka ndị a: “Amalitere m ịrụ ọrụ na ihe anyị kpọrọ 'kọmputa analog' na ndozi ụgbọelu na United States Air Force na 1970. Mgbe m gụchara ọrụ agha m wee laghachi Na mahadum, a kpọbatara m na microprocessors na mmemme asụsụ igwe na ndị nhazi Intel 4040. Mgbe nke ahụ gasịrị, arụkwara m ọrụ, jikwaa ma hazie akụrụngwa sitere na Digital Equipment Corporation PDP-8, PDP-11 (/ 45 na / 70) na ndị obere kọmputa. Onyedika Ejikọtara m na mbu mbu nke microcomputers dabeere na Unix, na mmalite afọ 80. Anọ m na-arụ ọrụ na mmepe ngwanrọ, ọrụ, ntinye na nkwado kemgbe ahụ.
Nke ahụ kwuru, na-enweghị oge ọzọ, nke a bụ ntụgharị okwu nke isiokwu a, nke m na-emesi ike, uru niile dị na onye edemede mbụ na njehie ọ bụla nwere ike ịbụ nke m.
Akụkụ dị mma nke ihe m kwuru n'oge gara aga banyere ịwụnye Fedora na laptọọpụ ọhụrụ m bụ n'echiche nke "kama ịgwa anyị ihe anaghị arụ ọrụ, biko nye anyị ntakịrị ozi gbasara nhọrọ anyị nwere rụọ ọrụ ahụ ".
Ọ bụ ezigbo ndụmọdụ, obi dịkwa m ụtọ ịgbaso ya. Ọ bụrụ na ihe niile anyị na-eme bụ ịnọdụ ala na mkpesa banyere akpụkpọ ụkwụ abụọ Linux na sistemụ UEFIO yikarịrị ka anyị ga-akụda ụfọdụ mmadụ ịnwale ya, eziokwu ahụ bụ na enwere nhọrọ ndị na-arụ ọrụ na-enweghị nnukwu mbọ.
Otú ọ dị, nke mbụ, m ga-ekwughachi ihe m kwuru ọtụtụ ugboro na mbụ. Mmejuputa nke obula UEFI ọ dị iche - na ọbụghị naanị ntakịrị ihe dị iche, nke obula bu.
Fọdụ na-arụ ọrụ nke ọma na nrụnye Linux, ha na-ebu ụzọ buo nke ọma na igbe. Ndị ọzọ na-esiri ike, enweghị atụ, na-ewekwa iwe na enweghị nkwekọrịta ha ma yie ka ha na-agabiga Linux iji bulie. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbido Linux na Windows buutu, gbalịa ịchọta nkọwa nke onye nwere sistemụ ahụ ị na-eji, ma ọ bụ opekata mpe usoro sitere n'aka ndị nrụpụta ahụ.
Ok, kedụ kedụ ohere dịnụ?
1. Wụnye Linux GRUB boot booter
Ọfọn, nke mbụ na obi abụọ adịghị ya na ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, bụ ịwụnye bootloader idide Linux dị ka ndabere buut ihe, na-enwe akara nke sọrọ-buut na Windows.
Iji mee nke a, n'ezie, ị ga-enwe nkesa Linux nkesa na-arụkọ ọrụ UEFI - ndị m nwara ma nwee ike ịgba akaebe bụ openSUSE, Fedora, Mint Linux y Ubuntu, ma enwere ndi ozo ma odi otutu ihe na abia n'ihu.
Ọ bụrụ na ị nwere nkesa Linux na-akwado buut echedoro UEFI, ọ dịghị mkpa na ị gbanwee ntọala nhazi UEFI, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ga-ahọrọ iji gbanyụọ Secure Boot na agbanyeghị.
Mgbe ị na wụnye nkesa Linux na-akwado UEFI, ma ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị na nhazi ngwa ngwa UEFI ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ị nwetaghị ihe ọjọọ "reboot" (ihe m hụrụ na - eme ọtụtụ mgbe), yabụ ibughachi gị mgbe echichi zuru ezu ga - ewetara gị menu buut nke idide, na ị ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti Linux (ndabere) ma ọ bụ Windows 8 buut si na ya.
N'oge ahụ ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu n'ụlọ - mana buru n'uche na ahụrụ m sistemụ (na nke onwe) nke na oge ụfọdụ, na-emegharị ntọala Windows na mberede maka enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na nke a emee, ị kwesịrị ịtụle iji otu n'ime usoro ndị ọzọ akọwara n'okpuru ebe a, dịka ahụmịhe m bụ na nke a anaghị eme otu oge.
2. Jiri BIOS buut họrọ igodo
Nke abụọ ekwe omume bụ na ị họrọ Linux nkesa dakọtara na UEFI, na nwụnye e mere nke ọma, ma mgbe ị na-reboot m na-ebili na Windows kama Linux. Nke a nwere ike isiri gị ezigbo ike, mana ọ naghị esiri ya ike ịrụ ọrụ.
Ihe dị mkpa icheta bụ na nwụnye Linux atụkwasịla onwe ya na ndepụta mmalite - naanị ị ga-enwe ike ịbanye na listi ahụ iji bufee.
Easiestzọ kachasị mfe iji mee nke a bụ iji nhọrọ BIOS Buut Nhọrọ, nke a na-arụ ọrụ site na ịpị igodo pụrụ iche n'oge usoro ike ma ọ bụ ịmalitegharị. 'Igodo' pụrụ iche 'dịgasị iche n'etiti sistemụ, ahụla m mgbapụ, F9 y F12 eji ụfọdụ sistemụ m, ekwenyesiri m ike na enwere ndị ọzọ.
Ingpị ya ga-egbochi usoro buut nke Windows ma ị ga - enweta ndepụta nke sistemụ arụmọrụ dị - ma eleghị anya Windows 8 na Linux. Mụ onwe m anaghị a attentiona ntị na nhọrọ a n'ihi na enweghị m mmasị ịbanye na 'ọsọ' na usoro buut iji jide n'aka na m kụrụ bọtịnụ bọtịnụ na oge, ma ọ bụrụ na enwere m uche ma ọ bụ nwayọ nwayọ mgbe ahụ m ga-aga n'ụzọ niile. site na Windows boot na naanị reboot ozugbo ịlaghachi na nhọrọ nhọrọ buut.
Mana nke a adịghị ka ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ mkpa, ọ bụkwa n'ezie nhọrọ nke chọrọ nkwụsi ike na ịgbalị iji usoro BIOS dị egwu. Otu ụzọ enwere ike ịme nke a ka ọ dị mfe karị bụ ịbanye na ntọala BIOS ma họrọ mbido mmalite, ọtụtụ sistemụ na-enye gị ohere ịtọ oge 5-30 nke abụọ tupu Windows n'ezie akpụkpọ ụkwụ, nke Ọ na-enye ọtụtụ oge iji pịa igodo anwansi .
3. Kwado 'buutu akpụkpọ ụkwụ'
Nke atọ "mfe" ohere bụ nwee 'Legacy buut'na ntọala BIOS ma leghara ihe niile anya UEFI.
Nke a abụghị nhọrọ nke m onwe m na-ahọrọ, obere n'ihi na m dị isi ike na nke ọzọ n'ihi na, dị ka Adam Williamson kọwara m oge ụfọdụ gara aga, enwere ụfọdụ uru ọrụ iji buut. UEFI. Mana ọ bụ n'ezie nhọrọ bara uru, yana usoro nke itinye Linux na booting, ọ nwere ike bụrụ azịza kachasị mfe.
Naanị nsogbu m hụrụ na nhọrọ a bụ na ụfọdụ sistemụ na - eme ka o sie ike ịme 'Legacy buut', Ma ọ bụ n'ihi na nhọrọ ahụ zoro nke ọma na ntọala BIOS, ma ọ bụ n'ihi na ị ga-edozi paswọọdụ BIOS tupu ya ahapụ gị ịgbanwe ya. Anụla m na enwere ike ịnwe usoro ụfọdụ anaghị agụta 'Legacy buut'ọ dịghị ma ọlị, ma ahụtụbeghị m ụdị ihe a.
N'ọnọdụ ọ bụla, ịhọrọ ụzọ a abụghị naanị na ọ na-eme ka ihe dịkwuo mfe maka nhazi na ntinye ntọala abụọ, mana ọ na-enye gị ohere ịwụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkesa Linux ọ bụla ịchọrọ, n'agbanyeghị ndakọrịta na UEFI.
Mụ onwe m ejirila nhọrọ a wụnye nkesa na-abụghị Linux UEFIdị ka SolydXK, PCLinuxOS y Linux Mint Debian Mbipụta na nhazi nhazi otutu otutu na nkesa ndi ozo nke UEFI. Ya mere enwere m ike ịlaghachi ma gbanyụọ Legacy buut, ma jiri ya idide dakọtara na UEFI buut unsupported Linux.
Anọ. Gbalịa iji Windows bootloader
Nke anọ nwere ike ịbụ iji Windows boot loader maka Linux sọrọ buut. Ekwuru m na ọ kwesịrị ịdị, n'ihi na ndị mmadụ na-eziga okwu na-ekwu 'jiri naanị EasyBCD hazie ya ", ma ọ bụ ọbụlagodi" iji bcdedit'Mana gbalịa ike m, enweghị m ike ịrụ ọrụ.
Edere m banyere nke a otu afọ ma ọ bụ karịa gara aga mgbe m nwere sistemụ mbụ m UEFI, na echere m n'oge ahụ na nsogbu ahụ bụ naanị nke ahụ EasyBCD Amachaghị nke ọma iji gbochie mbido UEFI, ma ugbu a, m na-agbalị ọzọ, na ọhụrụ version nke EasyBCD na m nwere ike nweta si website nke NeoSmart ma ka enweghi ike inweta Linux buut ma oli.
Ugbu a enwere m ike ịdị oke egwu ịchọpụta, mana ọ bụrụ na mmadụ ga-abata tinye okwu na-asị "ọ na - arụ ọrụ nke ọma", biko biko dịrị njikere ịkọwapụta nke ọma, ma nye nkọwa zuru oke nke ihe ị mere mee ka ọ rụọ ọrụ. Maka na agbalịrị m ihe niile m nwere ike iche, na agbanyeghị ihe m na-eme, naanị ihe m na-enweta mgbe m na-achọ buut ọ bụla Linux echichi bụ a "Windows okpu buut" ozi.
Achọkwara m na weebụ maka ozi ndị ọzọ, naanị otu ihe atụ m nwere ike ịchọta bụ ndị dara n'otu ụzọ ahụ m. Enwere m ike ịchọta ọtụtụ ebe na-ekwu «EasyBCD ọrụ ", na" eji EasyBCD n'ihi na multiboot Windows 8, 7, Vista, XP, MacOS na Linux ", ma ọ bụghị onye na n'ezie na-ekwu" anyị mere nke a na Windows 8 UEFI na Linux, ọ rụrụ ọrụ, nke a bụ ihe ị ga - eme ».
Ihe m mere bụ ihe ndị a. M ebudatara ma wụnye EasyBCD 2.2 na Windows 8 sistemụ abụọ UEFI dị iche iche (nke a nwetara HP Compaq n'oge na-adịbeghị anya na Acer Aspire One 725). Mgbe m gbara ọsọ EasyBCD (dịka onye nchịkwa N'ezie) O juru m anya na ndepụta nke sistemụ arụmọrụ pụtara maka nhazi buut gị. Amaara m na bootloader Windows ahụbeghị ya ma ọ bụ nye aka buut ihe ọ bụla ọzọ karịa Windows 8. O were m nkeji iji ghọta na ihe edepụtara bụ ihe niile dị na ndepụta boot BIOS.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe a ga-enye ma ọ bụrụ na m jiri nhọrọ nhọrọ buut, dị ka akọwara n'elu, mana ọ bụrụ na m hapụ Windows buut ọ nweghị akara ndị ọzọ a. Ọbụna ma ọ bụrụ na m tinye oge 30 nke abụọ na mmalite mmalite Windows, na-eji bcdedit o EasyBCD, Ọ ga-akwụsị ma depụta Windows 8 naanị EasyBCD Ọ depụtara ndị ọzọ niile? Aghọtaghị m, mana m nwere olile anya na ọ nwere ike ịbụ ezigbo akara, na EasyBCDMa ọ dịkarịa ala achọtara m nhọrọ ndị ọzọ, na ihe niile m ga-eme ugbu a bụ ịgbakwunye ha na menu menu bootloader Windows.
Agbalịrị m ime nke ahụ, na-ebu ụzọ kaa akara otu n'ime nkesa Linux dị ka ihe bu ihe ndabara. EasyBCD Ọ na-ahapụ m ka m mee nke ahụ n’enweghị mkpesa ọ bụla, mana mgbe m weghachitere m ahụ na ọ laghachiri ozugbo na Windows. Bah !.
N'ihi ya, m gbalịrị iji "Tinye" nhọrọ na EasyBCD, m wee nye ya ozi niile maka otu akụkụ nke Linux. Oge a ma ọ dịkarịa ala mgbe m weghachitere ọ gosipụtara nhọrọ Linux na listi buut, mana mgbe m gbalịrị buut ọ nyere m ozi "Windows Boot Failed". M tikuru mkpu na kọmị kọmpụta na ọ naghị anwa ịmalite Windows, yabụ kedu ka ọ ga-esi daa, mana nke ahụ enyereghị aka.
Mgbe ahụ achọpụtara m na ihe m na-ehiwe EasyBCD ọ bụ mbọ buut ihe a na-akpọ /NST/neogrub.efi (ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, enweghị m aha aha m n'isi ugbu a, m na-arịa ọrịa EasyBCD na Windows, yabụ na agaghị m ele ya anya ọzọ).
N'ihi ya, m gbalịrị itinye ọtụtụ faịlụ buut na aha ahụ - na mbụ m nwara onyinyo grubx64.efi site na otu nkesa Linux, mgbe ahụ, m gbalịrị idetuo buut buut (mbụ 512 bytes) site na diski na / ma ọ bụ usoro Linux faịlụ. , dị nnọọ ka ọ ga-mere iji sọrọ buut na Windows XP na Linux, na mgbe ahụ ka m nwetara sikwara ike njite na dị nnọọ tinye a Linux kernel n'okpuru na aha. N'ezie, ọ dịghị onye n'ime ha rụrụ ọrụ.
Emechara m kpebie, dabere na ahụmịhe nke m na enweghị akụkọ ịga nke ọma ma ọ bụ ozi nhazi nhazi n'ezie na weebụ, na EasyBCD ọ baghị uru n'ịmepụta bootable Windows / Linux dual-boot UEFI nyeere. Enwere ike iji ya ma ọ bụrụ na enyere ya aka Legacy buut, wee setịpụ ya otu esi eme ya na Windows XP, mana ọ bụrụ na ị ga - eme nke ahụ jiri usoro atọ dị n'elu wee zọpụta onwe gị ọtụtụ nsogbu.
Mgbe ọgụ na mgba EasyBCD Ruo ogologo oge, na n'ikpeazụ ịkwụsị, m kpebiri inye ndị ọrụ bcdedit a nwale, nke bụ usoro Windows ọkọlọtọ maka ụdị nhazi a. Amaara m nke ọma na mmemme a, ebe m jiri ya setịpụ boot-boot na Windows XP, yabụ na anaghị m agagharịkarị na ọchịchịrị.
Ma ọzọkwa, n'agbanyeghị ihe m gbalịrị, ọ gaghị ebu ụzọ. Enwere m ike ịnweta ihe Linux tinye na menu bootloader Windows, enwere m ike ịtọ ụdị ihe dị iche iche dị ka ihe buut, ma ọ dịghị onye n'ime ha na-arụ ọrụ. N'ikpeazụ, naanị iji gosi onwe m na anaghị m eme ihe ọ bụla na-ezighi ezi (ma ọ bụ nzuzu), m debere ihe buut maka otu n'ime Linux m na-anwa ịbụ Windows 8 ọ malitere ozugbo. Grrrr!.
Nkwubi okwu m na ihe ndi a nile bu na, otu n’ime ihe ndi kpatara EasyBCD ọ baghị uru na imepụta Linux dual boot, ọ bụ enweghị isi na-agaghị ekwe omume iji Windows 8 bootloader buut Linux na buut UEFI nyeere. Ọzọkwa, enwere ike ịme ya site na Boot Legacy, mana echeghị m nke ọma n'oge a ịchọpụta.
Ọ bụrụ na ị maara na m hiere ụzọ na nke a, ma hazie onwe m Windows 8 iji buo Linux site na iji Windows bootloader, gwa m na nkwupụta, biko, biko kpọọ ma kọwaa otu i si mee ya, maka na m ga-achọ ịma.
5. Wụnye bootloader dị iche iche
Nke ise multiboot nhọrọ UEFI bụ ịwụnye bootloader dị iche iche, dị ka AJ. nke Roderick W. Smith dere. Nke a nwere uru nke inwe ike ịkwanye ihe ọ bụla - Windows, Linux, MacOS - ma dị ike ma dịkwa ngbanwe na-akpaghị aka na-achọ ihe nwere ike ịdị na diski ahụ, na-ewetara ya dị ka ndepụta nhọrọ nhọrọ buut.
O di nwute, naanị ihe ọ na - edozighi bụ nsogbu BIOS enweghị nkwenye / enweghị ike ịkọwapụta akọwapụtara n’elu. Ọ bụrụ na Windows ma ọ bụ usoro buut, ma ọ bụ ihe ọzọ na-emebi ntọala BIOS ma gbochie gị ịtọ ntọala idide dị ka ndabara bootloader, mgbe ahụ, ọ ga-fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-egbochi ọnọdụ nke AJ..
6. Gbalịa ihe ọzọ ga-adịru nwa oge
Nhọrọ nke isii abụghị ezigbo ihe ngwọta maka nsogbu nhazi nke BIOS na-enweghị nkwekọrịta / enweghị ike ịkọwapụta, ọ bụ ihe na-adịghị mma maka oge.
Ọ na-apụta na na mgbakwunye na ndepụta "usoro nhazi" nkịtị na nhazi buut UEFIEnwekwara "uzo ozo" ozo, nke gosiputara nhazi otu oge.
Nke a bụ ihe efu, yabụ sistemụ ahụ na-agbaso usoro usoro buut, mana ọ bụrụ na edoziri ya, sistemụ ahụ ga-ebu ụzọ bido ihe ahụ, ọ pụtakwara na edoziri ya ka bọọlụ na-esote wee laghachi n'iji ndabara buut usoro ndozi.
Enwere ike ịhazi nhazi "esote buut" site na Linux n'iji ya efibootmgr -n XXXX, ebe XXXX bu ihe ntinye buutu, ka ichoputa onu ogugu Linux, jiri efibootmgr na enweghi onodu (ma obu efibootmgr -v ma oburu n’acho ihu ihe nile putara ihe) - Nọmba ahụ ga - abụ ihe dịka 0001 ma ọ bụ 0002 n'ọtụtụ ọnọdụ.
Enwere ike ịtụgharị nhọrọ a "buut na-esote" ka ọ bụrụ ọrụ na-adịgide adịgide site na ịtinye iwu efibootmgr na ederede Linux boot, yabụ oge ọ bụla Linux buut ga-emegharị ka ọ ga-ebu Linux ọzọ otu ugboro. Ekwughị m na ọ dị mma, ma ọ bụ mara mma, ma ọ bụ ọbụna mara mma, mana ọ na-arụ ọrụ, n'ihi na m gbalịrị.
7. Eji Aghọ Aghụghọ Ule ndabara buut usoro
N'ikpeazụ, nhọrọ nke asaa bụ "ịghọ aghụghọ ule" usoro ndabara ndabara site na itinye shim.efi Linux ihe oyiyi (ma ọ bụ grubx64.efi ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ) Ogwe Nchekwa) ebe Windows Boot Manager na-ejikarị.
Na sistemụ m nwalere, nke a bụ na buut nkebi EFI (a na / dev / sda2 na Linux, n'ịnyịnya dị ka / buut / efi), n'okpuru aha /EFI/Microsoft/Boot/Bootmgfw.efi. Enweela m ihe ịga nke ọma na ime nke a, mana m na - adọ gị aka ntị na ụfọdụ sistemụ (ọkachasị HP Compaq) na - eme ihe ike banyere ịlele na ịtọgharị nhazi buut UEFI Site na ndabara ha na-achọpụta mgbe ụfọdụ na Bootmgfw.efi abụghị n'ezie mmemme "mbụ" arụnyere, ọ na-enwetakwa otu nke mbụ wee debe ya n'ọnọdụ ya, si otú a na-edozi aghụghọ aghụghọ. I nwere ike iche n'echiche ihe iwe na nkụda mmụọ mgbe nke a mere ...
Yabụ na ị nwere ya. Nhọrọ asaa dị iche iche maka ịhazi multiboot na Windows 8 na Linux.
Echere m na e nwere ndị ọzọ m na-echeghị banyere ha, ma ọ bụ na anaghị m echeta oge ahụ, mana ndị a bụ ndị m chere na ha pụtara ìhè.
Agbalịrị m ha niile n'otu oge ma ọ bụ ọzọ. Ihe kachasị mma na n'ezie nke kachasị mfe bụ nke mbụ, naanị ị ga-etinye ma buut idide, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na usoro gị. Ama m na ụfọdụ ndị na-a swearụ iyi na nhọrọ nke abụọ ezuola, naanị site na ịpị Họrọ Buut, nakwa na ha chere na m dị umengwụ na isi ike site n'iji nke ahụ eme ihe.
N'ihe abụọ ahụ, ọ ga-ewekwu nraranye, mmụta, na nnwale na njehie iji mee ka ndị ọzọ rụọ ọrụ (ụfọdụ anaghị m arụ ọrụ ugbu a). Mana n'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị kpebisiri ike ịbanye Linux na Windows, ị ga-enwe ike ịme ya.
Ọfọn, ruo ugbu a ntụgharị nke edemede mbụ, enwere m olileanya na ọ na-enyere ndị nwere nsogbu yiri nke a aka ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Wayszọ asaa iji melite multiboot na Windows 8 na Linux
Ndo ikwu okwu banyere ihe na-abụghị isi isiokwu, mana olee isiokwu ị na-eji? Enwere m mmasị karịa ihe ọ bụla na agba oroma nke akụkụ
Lol .. Nke ahụ abụghị OS, ọ bụ UEFI nke bọọdụ Gigabyte.
Kpọmkwem. Ọ bụ interface nke a UEFI
Yup ... dị ka ndị ọrụ ibe isaac na eVeR na-ekwu n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ onyonyo nke UEFI interface nke Gigabyte board 😉
Edemede mara mma, chekwaa ya dịka ọkacha mmasị maka ọdịnihu.
Daalụ maka ịkwụsị site ...
Ndewo, site na ịmata ihe.
Dika onye ode akwukwo mbu siri kwuo na o duru ndi mmadu ume iwepu uefi n'ihi na i nwere uru oru, onwere onye ma ihe ha bu?
N'uche m (Ọ KWES personalR personal n'onwe m n'ụzọ), UEFI bụ ihe ngwọta maka nsogbu na-adịghị adị; Abụ m otu n'ime ndị na-eche na ọ bụ nnabata ọzọ nke Microsoft (otu ọzọ), na ndị na-emepụta ihe ngwaike iji kwado ojiji nke ngwaahịa ha ma mee ka o sie ike maka asọmpi ahụ na oge na-adịghị anya, mee nhazi usoro nke os (dịka onye ọ bụla onye na-enweta igwe na UEFI na Windows 8 arụnyere na mbụ nwere ike ịhụ). Agbanyeghị, m kwughachiri, nke ahụ bụ MY echiche nke onwe, yabụ ana m akwado ka ị mee nyocha ngwa ngwa na San Google yana usoro UEFI + ma ị ga-enweta njikọ nke ozi zuru oke nke ị nwere ike ịmepụta echiche gị.
Ewoo! na-ekele gị nke ukwuu maka ịkwụsị site na ịza ajụjụ ...
ok aga m elele anya mgbe ahụ, mana naanị otu ajụjụ ọzọ n’isiokwu a, kedu ihe bu ihe nketa butere?
Ọ bụghị otu ihe ahụ dị na UEFI dị ka ndọtị nchekwa, otu sitere na intel na nke ọzọ site na MS. UEFI bụ ihe dị ka IPv6, ọ na-abịa iji dozie ọtụtụ nsogbu ndị emere na ọtụtụ iri afọ. Iji GPT merie njedebe MBR ma nha na oke nke akụkụ 4 kwa diski. Ọ na-arụkwa ọrụ "dị ọcha" ọnọdụ 64-bit, n'adịghị ka BIOS, nke ka bụ 16-bit. Onwe m, oge m ga - eji multiboot ejiri m clover EFI (ọ na - amalitekwa OSX), ọ na - achọpụta OS na - agụ folda ndị dị na nke mbụ VFAT. Ma ọ bụrụ na sistemụ anaghị amalite, jiri USB ma ọ bụ CD dị ndụ, iji nweta nkebi mbụ ahụ ma hichapụ ma ọ bụ bugharịa folda ahụ.
Ee, m doro anya na UEFI abụghị otu dị ka Secure Boot, ihe na-eme bụ na ihe dị mkpa ("mmelite" nke BIOS) iji mejupụta ntụpọ na-agbakọ site na oge na ọganihu nke teknụzụ, bụ ọ gbagọrọ agbagọ n'ụzọ, tumadi n'ihi mmetụta nke Microsoft na ọgwụgwọ ahụ mechara bụrụ ọrịa ka njọ.
N'aka nke ọzọ, ntụnye ị nyere doro anya dị irè, ihe na-eme bụ na n'ọtụtụ oge, ọ bụrụ na itinye ya na laptọọpụ nke arụnyere na Windows 8, ị ga-efunahụ ikike nke akụrụngwa naanị maka eziokwu nke ihichapụ ma ọ bụ ịkwaga nchekwa nke nkebi setịpụrụ na OS
Ọchịchọ ịmata adịkwa akwụkwọ ikike. Ọ bụrụ na m gbanwee akụkụ nke windo na laptọọpụ ọhụrụ wee mepụta ndị ọhụrụ iji wụnye linux, nke ahụ ọ na-emekwa ka m tufuo akwụkwọ ikike laptọọpụ ahụ?
Nke mbụ, ezigbo ọkwa na nke abụọ Achọrọ m ịhụ ma ị ga - enyere m aka.
Ihe na - eme bụ na m nwere Compaq 18 All-in-On ma ọ na - abịa na windo 8 site na igbe na ihe m chọrọ ime bụ boot abụọ nwere windo 7.
Emere m ihe niile gbasara nkebi disk ka m nwee ike iwunye windo na nkebi ahụ.
Tinyeworị BIOS ma wepu ọnọdụ buut dị mma ma mee ka ọnọdụ UEFI dị.
Ugbu a nsogbu bụ na mgbe m na-etinye windo ... na akụkụ nke "ịwụnye nhọrọ dị elu" m na-ahọrọ nkebi nke diski m mepụtara ma gwa m nke a "Windows enweghị ike ịwụnye na diski a. ahọpụtara ahọrọ nwere ụdị GPT akụkụ GPT »n'eziokwu nke na-agwa m akụkụ niile m nwere.
Enyochawo m ihe ngwọta na ịntanetị mana m na-achọta ngwọta maka ndị chọrọ ịwụnye windo 7 ma ọ bụghị Dual buut ebe ọ bụ na ndị ọzọ ngwọta m ga-ehichapụ m nkebi na ọbụna wimdows 8 usoro iji nwee ike ịwụnye ya na nke ahụ bụ ihe ọ bụghị Achọrọ m.
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibinye aka
Imirikiti bọọdụ desktọọpụ na-abịa na nketa ihe nketa enyere.
Ee, mana ihe na-agbagwoju anya ma ọ bụrụ na ọ bụ laptọọpụ ...
Abịawo m ikwu na opekata mpe na nne m AsRock UEFI nwere akpụkpọ ụkwụ nwere nkwarụ, ihe dọtara uche m
Zaghachi Andy Z
KEDU IHE OWU !!!
Ọ bụrụ na m chọrọ ịwụnye sistemụ arụmọrụ nke masịrị m na ugbu a, ọ gaghị adị ka nke ahụ!
Nke ahụ dị na mbụ, n'ọtụtụ ị ga-ahazi BIOS iji bufee CD ma ọ bụ pendrive na onyogho ISO nke nwere nkesa dị njikere iji wụnye. Ọ bụ otu ụzọ ọzọ isi egosi anyị na kọmputa Windows sitere na Microsoft (ọ bụghị onye chere na ọ zụtara ha).
Ndewo, ana m ahapụrụ gị vidiyo nke otu esi eme ya, ọ bụ ezie na akọwaghị ya nke ọma.
Okwu dị na ya bụ na ị wụnye cd ya na ultraiso, lee ya anya. Deu.
Eziokwu bụ, onyinye gị magburu onwe ya, naanị ihe m na - eme ka ọ dị ọhụrụ bụ akwụkwọ ndetu nwere nhazi ahụ.
Daalụ nke ukwuu maka onyinye,
Achọghị ị tosiri n'ihi na ewezuga ntụgharị gị ọ gaghị eru anyị aka.
Enyemaka maka nzọụkwụ 7.
Nwere ike onye na-agwa m nke faịlụ m kwesịrị i copyomi ma ọ bụ nyegharịa aha m ime nzọụkwụ "7 nzuzu ndabara buut usoro"
Agbalịrị m ma emeere m ihe na-ezighi ezi n'ihi na ọ bịara na pront grub> na enweghị m ike ịbanye Windows ma ọ bụ Linux, daalụ na enwere m ihe oyiyi HD.
magburu onwe ya dị ka ọdịnaya mgbe niile site na Linux 🙂
Abụ m otu n'ime ndị nwere obi ụtọ na nhọrọ 1 rụụrụ ya ọrụ, m wụnye ubuntu 14.04 64bit na Asus n56vb na eziokwu bụ na ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke.
okwu mbu m na-eme na blog a na eziokwu bụ na m soro ya ogologo oge.
daalụ !! Cheers
Ekwesiri m ibipụta nke a ka m nwee ike ime ya na laptọọpụ XD m
Nke mbu, daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ ndị a n'asụsụ Spanish zuru oke.
Nke abuo, akwụkwọ ndetu m bụ hp na win8.1 arụnyere, enwere m ike ịwụnye Debian n'abalị ụnyaahụ ma echetaghị oge ahụ, amaara m na ọ dị mma n'ihi na m weghachitere ma banye na win8, mgbe m bidoghachiri m jisiri ike ịbanye site na ịpị F9 na ịhọrọ nhọrọ nke Debian m, nke meghere Grub m ma si otú a dị mma. Ya mere ajụjụ m dị na nkwanye 1 na "Wụnye Grub" Kedu nkebi m kwesịrị ịwụnye grub iji mee ka ọ bụrụ bootloader ndabara? Okwesiri ibu na nkebi ebe windo $ bootloader bu? .
Mara: Ejiri m UEFI rụọ ọrụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nwekwara ike ịjụ na nnọkọ ahụ, ụmụ okorobịa ahụ na-adị njikere mgbe niile inyere aka http://foro.desdelinux.net/
Ekelere gị maka edemede a na-atọ ụtọ ihe ọmụma niile.
Agbanyeghị na enweghị m ahụmịhe n'okwu a, amaara m okwu ahụ na enwere m ike ịsị na site na inyocha n'ọtụtụ ọgbakọ na blọọgụ, enwere m ike ị nweta boot abụọ n'ụzọ dị mfe, ụzọ kachasị mfe iji mee ya bụ ịbanye BIOS ozugbo na EUFI nhazi m gbanyụrụ ya wee hapụ Kwụsị aka na ntinye nke ubuntu Amaara m na ubuntu na-akwado uefi mana achọpụtara m na ọ ga-arụ ọrụ, m wee wụnye elementrị os wee nwee ike ịga n'ihu ịwụnye OS's grub nke arụnyere bụ 1.99 Ọ bara uru ikwu na m wụnye ubuntu na windo windo ahụ ihe m dị ka ọ dị iche ebe m ghọtara na ọ na-arụ ọrụ na mgbakwunye.
Ee Interiano dijo
Eziokwu bụ na m na-eche dị ka ọtụtụ na ọ bụ nnabata nke Microsoft ebe ọ bụ na ọ naghị abara anyị uru ma ọlị, ọ bụ ezigbo ihe iji nwee ike ịwụnye Linux na Windows 8 n'otu kọmputa ahụ.
Zaghachi Noe Interiano
Achọrọ m enyemaka na netbook ụlọ akwụkwọ, Ubuntu arụnyere na windo 8.1 mana mgbe ịmalite ya naanị na-egosi ma bido, ọ na-ebu Ubuntu, ndị ọrụ ntanetị na-egosi na arụnyere Windows 8.1 ma ị hụ ya na ngalaba diski ike.
Enwere m ike ịnweta ajụjụ m na mbido sistemụ abụọ na ị họrọ nke ịchọrọ ịrụ ọrụ.
ụfọdụ ndu nke usoro ị ga-eso,
Ọ bụrụ na ị dozighi anya ahụ ebe a
na ịntanetị enwere ọtụtụ ntinye na-ekwu maka ntọala grub, nhọrọ ndabara, oge, ihe ndabere ...
Ndewo ezigbo m agụọla isiokwu ahụ ma eziokwu ahụ dị m n'anya na amachaghị m ihe gbasara nhazi, mana enwere m nsogbu, na kọmputa m enwere windo 7 na Fedora arụnyere, ugbu a nsogbu bụ na enweghị m ike ịmalite na nchekwa inkpụrụ dị na windo Ọ ga-amasị m you nwere ike ịkọwara m n'ụzọ dị mfe ihe m ga-eme ka m wee nwee ike ịrụ ọrụ a, ekele na ekele M ga-echere azịza gị ...
Zaghachi Alfredo Marin
Ndewo Alfredo, enwere m ike ihie ụzọ mana ụzọ m ga - esi banye na ọnọdụ nchekwa ka dị n'ime windo windo, yabụ ozugbo ahọpụtara ntinye win7 na grub malite ịpị F8 ma megharịa sekọnd abụọ ọ bụla na windo nke oge anaghị agafe, nke a emeela mgbe niile ma sistemụ arụmọrụ ekwesịghị imetụta mmalite nke ọzọ.
N'ikpeazụ ihe m mere bụ ịwụnye Debian m hụrụ n'anya ma wụnye ihe omume igwe a, virtualbox, ebe m wụnye win7 maka ụfọdụ egwuregwu 😀 Otu a ka m na-amalite na Linux ma ọ bụrụ na m chọrọ igwu egwu m ga-emeghe igwe arụmọrụ.
Anọ m na-eche ma ị nwere ike ịwụnye linux naanị site na buut?
My pc bụ otu n'ime ikpe ị kwuru na ọ naghị anabata akara aka UEFI nke OS ọ bụla na-abụghị windo 🙁
Zaghachi ka deisy
Ezigbo isiokwu. Daalụ maka ntụgharị asụsụ ahụ.
Ndewo, enwere ike inyere m aka m chọrọ ịpụ na USB ma mgbe m mere menu buutọ na ihuenyo na-agba oji ma gion na-egbu maramara ọ naghị amalite na echere m na ọ bụ n'ihi na m ga-ewepụ uefi na bios mana ọ na-eme ekwela ka m deactivate ya na amaghi m ihe mere m ji windo 7 nwere ike onye nyere m
Na bios (ọ dabere na ihe ọ bụ), na nke m ma ọ dịkarịa ala m na-agaru akụkụ nke nhazi nhazi, enwere ihe dị nso a na-akpọ "Legacy Mode", ị ga-emerịrị usoro ihe nketa, yabụ ọnọdụ uefi ọ ga-nkwarụ, mgbe na hazi ihe nketa mode buut iji hapụ USB dị ka ndị mbụ nhọrọ, chekwaa mgbanwe na ụzọ ọpụpụ. Ihe omumu nke komputa m dọrọ m aka na nti na mgbanwe bios nwere ike imetụta nchedo akụrụngwa na ihe ndị ọzọ, yabụ na-ajụ gị ka pịnye nọmba na keyboard nke na-etinye gị ebe ahụ na ihuenyo ahụ, mgbe emechara nke a, sistemụ na-amalite na usoro ihe nketa (nkịtị). Banyere.
Enwere m mmasị na post gị, n'oge ahụ amaghị m otu esi etinye Linux, n'eziokwu m gaara enwe ike ịmalite Puppy Linux, m ga-aga n'ihu nyocha iji hụ ma m nwetara ya, mana enweghị obi abụọ na edemede gị enyerela m aka ịghọta ohu nke anyị nyefere obere windo, nke ọma na ndị ọzọ, ọ naghị ejide m ọzọ
ekele diri onye oma
Zaghachi na eeyygg@gmail.com
M nnọọ wụnye Windows 270 na Colombian Samsung NP7 igwe na efi mode, achọpụtara m na ụlọ ọrụ mmepụta ihe uefi na-arụ ọrụ, mana na-enweghị nchebe buut, achọpụtakwara m na ọ nwere nhọrọ na uefi bios, ka ihichapụ! Ihe ntinye aka dijitalụ niile (asambodo efi) nke na-abịa na akụrụngwa yana enwekwara nhọrọ iji tinye ma dochie nke o nwere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Windows 8 maka mbinye aka dijitalụ ọ bụla nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla, ya mere ana m achọpụta na Samsung ka anaghị anabata ntinye nke buut echekwara…. ma ọ bụ na ọ chọghị ịdaba na ịmachi onye ọrụ iji wụnye windo XP …… n'ihi na laptọọpụ a na-eweta nhọrọ iji rụọ ọrụ nchekwaboot na ihe dị egwu akpọrọ csm os ……
Daalụ maka post…. Ka m na-echeta, Agbalịrị m ịwụnye windo 7 na efi mode na laptọọpụ acer yana laptọọpụ adịghị eweta nhọrọbootboot boot. ya mere enweghi ike ime ihe ọ bụla karia iweghachite na usoro mmepụta ihe factory ..
Ndewo… isiokwu na-adọrọ mmasị… mana ka anyị rute na isi, ebe m rutere na ibe gị, n'ihi na enwere m nsogbu na nhazi uefi na mbadamba mbadamba Chinese m w4 na mmeri 8.1 pro…
Achọrọ m ịwụnye ubuntu na nkebi (nkebi m na-emeghị na oghere gụnyere nke windo mgbake windo dị) nke na-enweghị nsogbu, mana n'oge m bidoghachi, ihuenyo ojii na-adịghị mma na-egosi na efi shei version 2.31 n'ime nke ị ga - abanye iwu ... abatala m ụzọ ọpụpụ, (naanị iwu nke na - arụ ọrụ) ma alaghachila m bios ...
Tupu echichi nke ubuntu, ewerewo m ọnọdụ uefi ahụ adịghị mma, etinyewo m ya na ihe nketa, nke m na-eme site na njikwa dị ka onye nchịkwa ... ihe dị ịtụnanya bụ na ugbu a windo njikwa windo apụtaghị dị ka nhọrọ buut na ndepụta nke bios nhazi… naanị uefi.
site na bios enyem ya puku nhazi mana o nweghi oru diri m, obughi na igodo f nke keyboard USB ejikọrọ na mbadamba ... o naghi achoputa USB pendrive, ncheta sd, odighi ihe ozo putara ... nani kiiboodu ...
now my queries are as these ... ike a w8.1 mgbake pendrive ọrụ nke si a USB ebe nchekwa na-eje ozi dị ka a buut manager? n'agbanyeghị o doro anya na ọ bụghị ịchọputa ihe ọ bụla si USB?
Enwere usoro ọ bụla iji weghachite mbadamba na pc, yana usoro buut ma ọ bụ wụnye ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ bios na mpụga? Ahụwo m na ukara peeji nke mbadamba na e nwere ndị ọkwọ ụgbọala nwụnye mmemme site na PC, ma o doro anya na ha bụ ndị na-gam akporo mbadamba…. A ga-enwe usoro yiri nke ahụ maka windo?
Enwere iwu na site na efi shell, na-eduga m ịmalitegharịa windo, ma ọ bụ tọgharịa mbadamba nkume kpamkpam, ma ọ bụ mee ka m mata ụwa windo ọzọ?
Ka ọ bụ naanị na m ga-ewere ya nye onye ọrụ aka?
daalụ maka azịza gị n'ọdịnihu ... ekele si Chile!
Zaghachi ka augus
Ndewo, ọ dị ka mgbe ị na-eme pendrive na RUFUS ị ga-ahọrọ ụdị nkebi ị ga-ahọrọ GPT maka UEFI ma otu ahụ ka bios si amata ya ... Ana m anwale .. ọ bụrụ na ọ rụọ ọrụ, aga m agwa gị SLDS si Chile
Nhọrọ ọzọ nwere ike ịbụ ... ịhazi ihe niile ma wụnye Windows7 wee Ubuntu?
ugbu a aga m anwale ihe niile, ana m ekele gị nke ukwuu maka ilekọta gị, n'oge na-adịghị anya, m ga-enye gị ụfọdụ azịza .. mgbe m nwere ha. anyị nọ n'otu ikike ..
Zaghachi Juan Acuña
Correctzọ ziri ezi iji mee Windows arụ ọrụ buut na EasyBCD kọwara na weebụsaịtị a:
Ọ bụ maka ịme nkebi maka Grub dị n'okpuru windo na ka ọ rụọ ọrụ, ozugbo arụnyere Linux, ị ga-eji EasyBCD 2.2
Ntinye linux a ga - enye gị ohere iwepu ya kpamkpam n’enweghị mbido Windows opekata mpe.
Onyinyechi Nwosu dijo
Haber Antonio, kedu usoro nkuzi ị na-ejikọ bụ nhazi EasyBSD? N'ihi na m na-agụ dum nkuzi na ọ dịghị ihe metụtara nke a.
Enwere m isi ọwụwa zuru oke nke nwere Win8-Debian dual boot, ịmalite ịbịa leta (ikekwe nke a bụ naanị ihe ị chịrị ọchị) na ịgụ akwụkwọ na-eche otu ụdị ozi, na n'ikpeazụ ịchọta ọzọ nke na-adịghị mkpa
Isiokwu ahụ enweghị ozi gbasara usoro a ga-eme, naanị ị kpọtụrụ ha, ọ dị ka m na-ekwu, iri nri, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti pizza ma ọ bụ pasta, mana ọ naghị agwa gị otu esi esi pizza ma ọ bụ otu esi esi nri pasta na ihendori ịchọrọ.
Enwere m Asrock H61M-VG3 na enwere m nsogbu a, ebe m ghọtara obere ihe na ọ bụ ahụmịhe mbụ m na ịwụnye sistemụ arụmọrụ abụọ. Ọ bịara na Windows 8 na enweghị m ike ịwụnye Windows XP na ya, ruo mgbe m mere ya site na imezi ihe na BIOS. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana mgbe ịmalitegharị ya egosighi m nhọrọ ọ bụla ịhọrọ n'etiti 8 na XP. M wụnyere EasyBCD "M ahazi ya" na ọ nweghị ihe ọzọ malitere. O kwuru na e nwere ndudue. Na faịlụ na-efu na system32. Agbalịrị m ALL etuto ahụ m nwere ike ịchọta na weebụ ma enweghị m ike ịnweta. M na-akọcha ụbọchị m zụtara ụbọchị agbamakwụkwọ a.
Ezigbo ihe ederede m mụtara ọtụtụ na dịka m chere banyere ya ma m wee kwubie na ọ bụ ihe owuwu ụlọ, ọfụma amachaghị m OS ruo ihe dịka otu ọnwa gara aga na achọtara m nsogbu a na otu izu gara aga ahụrụ m hp nke na-anaghị ekwe ka ịwụnye nkesa Linux, anwala ihe ọ bụla n'ihi na ọ bụghị kọmputa m kama echere m na ọ ga-enwe ike
Zaghachi ka nzọ
Na easybcd ị nwere ike. Nwara na eMachines 355 na windo 10 na-eso usoro aha a http://es.ccm.net/faq/10661-realizar-un-multiboot-con-easybcd
Ndewo, achọrọ m ịjụ ajụjụ, enwere m PC buut nwere Windows 7 na Ubuntu, mana achọrọ m ịgbanwe Windows 7 na Windows XP. Ajụjụ m bụ na usoro a kwesịrị ịhazi na ịwụnye XP na nkebi Win7? Nke ahụ dị nfe ka ọ̀ dị ihe ọzọ?
Ndewo Achọrọ m ịjụ ajụjụ, enwere m windo 10 mana m wụnyere kali linux, mana echefuru m ịme boot abụọ ahụ, mgbe ọ malitere windo 10 anaghịzi amalite ma ọ bụrụ na ọ bụghị kali linux, agbalịrịla m windo mgbake. ụzọ, mmadụ nwere ike inyere aka?
onye mmeri payta dijo
Enwere m nsogbu enwere m mmeri 7 ma wụnye m Linux centos 7 na nkebi ọzọ mana aura aura ka m na-ekwu okwu buut na mbido ịbanye ụmụ nwanyị di ha nwụrụ 7
Zaghachi onye mmeri payta
mgbe m wụnye a fechaa OS si windo 10 O nwere ike ịbụ na m tufuo ọtụtụ akparamagwa ya.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 na anyị ka nọ na uefi na Windows 11 ma ọ bụrụ na ọ nweghị uefi na igwe ọ na -ekwu na enweghị ike itinye ya ma ọ bụ kwuo maka akpụkpọ ụkwụ nwere nsogbu. M na -ahụ na ụlọ ọrụ na -aga n'ihu n'ọrụ ha iji gbochie ịwụnye linux na kọmputa ha. Ndị ọrụ ebe ahụ kwesịrị ime ndepụta nke kọmpụta na -anaghị ekwe ka ibute ụzọ abụọ. Nke a bụ iwepụ nnwere onwe gị ịhọrọ ihe ị ga-eme na kọmpụta gị, ndị nrụpụta ga-emerịrị itinye akụkọ a "Naanị dakọtara na Windows ọ bụghị akpụkpọ ụkwụ abụọ" mgbe ị na-arụ ọrụ na ndị na-ebu buut iji megharia nnwere onwe nke Onye nwe akụrụngwa. na ịzụrụ ya ma a naghị enye ya ya.
Zaghachi EA Mújica D
Ntanetị zuru ụwa ọnụ nke Ubuntu nwụrụ, ha weghachitere menu na windo na Ubuntu ọzọ dị ka ndụ ha niile